Mr. Faysal Rashiid (Nayruus)
Akhristayaasha maqaalkan, inta aanan ka shanqadhin jecaylka wadaniyada waxaan jeclahay inaan gacan togaaleeyo hal qodob oo hordhac unoqon kara maqaalkaygan kaaso ah:-
Waa maxay waddaniyadda
Akhristayaasha qiimaha leh, haddaan soo koobo wadaniyaddu waa dareen, ku beeran qofka leh dal(dhul) iyo dad, kaasoo(dareenkaasoo) taabanaya shakhsiga leh amma u ku beeranahay inaba haba yaraatee wax dareen ah iyo damiir banii aadantinimo. Waa haybad lagu mitaali karo ukun (beed) aad ku hayso gacmahaaga oo haddii ay kaa dhacdo aan lehayn hanba raac.
Haddaan waddaniyada intaa ku dhaafo, waxaa lama huraan ah inaan wax ka taabto jecaylka waddaniyadda(waddaninimo) taasoo aad mooddo inay aad ugu yartahay in badan oo ka mid ah hogaamiye kooxeedyada (Team Leadership) ay dadka badankooda u yaqaanaan qabqablayaasha dagaal.
Wadan jacaylku waa mid loo baahan yahay oo saameya lab iyo dheddig kasta islamarkaana ku dardar galiya qofkasta oo wadan leh inuu ku sifoobo wadani si uu ugguto waajibaadka qof ahaan ka saaran wadankiisa ee ah inuu wax u barto waxna baro ""sare uqaado aqoontiisa iyo midda dadkiisa"", Dhiso ""maalgaliyo dhulkiisa hooyo haddii uu leeyahay hanti ku filan oo usaamixi karta inuu maalgashi ku sameeya waddankiisa, amma kudhiiri galiya shaqsiyaadka leh awooddaas"" , Ushaqeeyo ""u adeego dalkiisa isaga kaga qayb qaadanaya adeegyada bulshada"" Difaaco ""ilaaliyo Diintiisa, xuduudaha dhulkiisa, danaha dalkiisa iyo dadkiisa iyo dastuurka intaba""" una hogaansanaado awaamirta iyo shuruucda dalka.
Jecaylka wadaninimo waxaa loo kala saari karaa labo qaybood, kuwaasoo kala ah:-
.Wadani togan iyo
Wadaniga togan:- waa wadaniga jecel dalkiisa iyo dadkiisaba balse haddii ay uga muuqato dhaliil maamulka dowladiisa aan ka aamusin ee farta ku fiiqa galdaloolada maamulka, isla markaana sheega sida loo toosin karo isaga oo ku qeexaya fikradiisa fayow ee saliimka ah balse aan ku socon hadaf iyo aragti dal shisheeye oo laga yaabo inay dantiisu tahay inaanu dalkaagu gaadhin wax horumar ah. Wadanigan wuxuu noqon karaa mucaarad. Wadaniga togani waa waddani maskax furan oo dhinayo badan wax ka fiiriya isla markaana miisama duruufaha dalkiisa iyo dadkiisa ku sugan yihiin, waddanigani ma aha mana noqdo mid dadkiisa u geysta dil iyo dhibaato ama ka hor joogsada deeqda loogu tala galay in lagu samata bixiyo walaalihiisa dhibaataysan. Umana dulqaato dhibaatooyinka loo geysto shacabkiisa. Waana wadaniga quman. balse aan ahayn sida dad badani ufahansan yihiin! inuu yahay ama ay yihiin kuwo wax burburiya ama mansab (]ago) doon ah.
Wadaniga taban:- waa wadaniga jecel dalkiisa, dadkiisa, dhaqankiisa iyo dowladiisa. Waxaana lagu tilmaamaa Muxaafid. Haddii dowladiisu dhaliil leedahay iyo hadii kalaba waa wadaniga dowladii dhalataba raaciyad u noqda ee ugu dadaalka badan fulinta awaamirta iyo shuruucda dalka.
Akhristayaasha qaaliga ah, waadaninimadu waa mabda' qaali ah oo haddii sida ay loo ilaaliyo dadkeedu horumar iyo kor u kaca dhaqaale ka gaadho dhinacyada farsamo iyo adeegga arrimaha bulshada.
Wadaninimadu waa u dhalasho dal(dhul) ee uu qofku udhasho. Tusaale ahaan haddii aad soomaali tahay waxaa mar walba ku huran sooca goray oo markasta soomaali baad tahay. Daba dhilif kasta ahow amma dawlad shiisheeye u adeeg amma cadaw soo jireen ah usacaba tun mar kasta soomaali baad tahay jinsiyadaadu dowladay dooni ha noqotee.
Waddaniyaddu (jinsiyadu) waa haybad lagu faano waana qiimaynta qaranimadaada waxayna la weyn tahay oo jecel qofkii fahansan in sharaftiisa qowmiyadeed tahay jacaylka waddankiisa hooyo kuna faano Hiddaha iyo Caadooyinka, dhaqanka , cimilada, wax soo saarka, khayraadka iyo hibooyinka kale ee dalkiisu kaga duwanyahay dal kasta oo kale.
Wadaniga togan iyo wadaniga tabanba waxay dalkooda jecladaan siiba marka ay dalka kale usafraan amma arkaan sida wadaniyadu tayo iyo qiimeyn ugu leedahay dadka wadankaas u dhashay iyo sida uu qofka ajnabiga ku ahi uga takooran yahay mudnaanta ay dadkaasi ku leeyihiin dalkooda.
Si kastaba ha ahaatee jecaylka wadanku waa muqadas, waa huwashada haybadda dhulkaaga hooyo, la'aantiina waxba kuma noqon kartid. Marka isku dey inaad mar walba sumcadda dalkaaga kor u qaado, waa sumcadaada,waa magacaaga qaranimo. Isku dey inaad wax yar ka abuurto si aad uga dhigto wax weyn sababtoo ah wax yar yar oo is biirsaday ayaa wax wayn noqda. Ogow inaad dadkaaga iyo dalkaagaba wax weyn u qaban kartid, sidoo kale aad wax weyn ka beddeli kartid dhaqan xumada ku baahday dalka, dulliga iyo darxumada hadheeyay shacab weynaha somaaliyeed meel kastaha ku nooladeene. Ogow inuu dadkaagu ubaahan yahay fekerkaaga saliimka ah iyo wax tar aan hagar ku jirin.
Akhistayaasha qiimaha leh, waxaan maqaalkaan kusoo abyayaa Su�aalo kooban oo ubaahan inuu qof kasta oo soomali ah isweydiiyo.
Adiga shaqsi ahaan kaalintee ayaad kaga jirtaa bulsha weynta somaaliyeed?
Ma waxaad tahay waddaniga togan mase waddaniga taban ?
Hoggaamiyayaasha hadda somaliya ka jira maxaad ku tilmaami kartaa ?
Waddankaagii manta marxaladee buu marayaa ?
Marba haddaad aragtay heerka waddankaagu marayo maxay tahay tallaabada lagaa rabo inaad qaadid, maxaase kuu qorshaysan?
Bulsha weynta somaaliyeed kaalita aad ka gali karto intay dhantahay ?
Dhammmaan su�aalahan waa kuwo aan quud-daraynayo inay kuu noqon doonaan halbeeg aad ku qiimayn karto waddaninimadaada islamar ahaantaasna kaaga baahan jawaab.
Ilaah Baa Mahad iskaleh
wixii afkaar amma tusaale ah waxaad iigusoo hagaajisaan cinwaanka ah :- E-mail: nayrus2003@hotmail.com
Waa walaalkiin:- Mr. Faysal Rashiid (Nayruus)